Daryeelka Beerta ee Beerka ah | December 2019
Sida loo isticmaalo daroogada "Seed", tilmaamaha isticmaalka
Editor Ee Doorashada December 14,2019
Ugu Weyn Ee Daryeelka Beerta ee Beerka ah
Daryeelka Beerta ee Beerka ah
Waxa aad u baahan tahay si aad u ogaato wax ku saabsan boogaha sii kordhaya
Basbaas macaan waa dalag aad u caan ah oo ka mid ah beeralayda qudaarta. Tani waxaa loo sharaxay dad badan. Waxay ka kooban tahay fitamiino iyo macdano waxtar leh, tiradaas oo ka badan tamaandhada iyo eggplants, waxayna leedahay wax lamid ah mowduuca ascorbic acid. Pepper wuxuu ku qurxin doonaa wax saxan oo ku saabsan miiskaaga fasaxa, wuxuu siin doonaa dhadhan macaan iyo caraf udgoon.
Sida loo quudiyo basbaas ka dib markii laga beerto dhul furan
Bannaanka u badan koraan basbaas macaan ee goobtooda. Beerashada geedo of this khudradda faa'iido leh dhacdaa inta lagu jiro xilli kulul iyo sidaas darteed waxay u baahan tahay daryeel taxadar leh. Ka dib markii la siiyay basbaaska leh waraabinta lagama maarmaanka ah iyo nafaqada, waxaad xaqiijin kartaa goosashada wanaagsan. Tilmaamo qaadashada beeraha digirta ah. Beer-beereedka beerta furan ee beerka furan wuxuu ku bilaabmayaa soo qaadashada seedling.
Waa maxay faa'iido leh oo waxyeello ka soo liqeysa?
Diyaarinta bakaylaha: liiska, tilmaamaha isticmaalka
Abuuritaanka badeecooyinka beeraha ee Ukraine ee sanadka ayaa kor u kacay qiimaha ku dhowaad 14%
Diyaargarow ugu wanaagsan ee aboorka baradho (qaybta 2)
Cawska lafaha, hantida faa'iidada leh. Qoryaha Tincture
Koraaya geedo eggplant ah
Pond for ducks iyo berriga
Bacriminta dabiiciga ah
Nadiifiyaha saafiga ah
Cuncunka dhiqlaha ayaa abuuray wax badan oo cayayaanka. Aynu fiirino daroogooyin badan oo kala duwan, iyagoo tixgeliyey dhammaan khibradooda iyo xayawaanka. Medilis Anticloc Ciladda Liquid waxay ka kooban tahay isku-dar ah saddexda pyrethroids firfircoon. Faa'iidooyinka Medilis ka timaada qashinka xayawaanka waxay ku dhuftey dhammaan gumeysiga qashin-qubka hal daaweyn. Read More
Liiska duurka berri ah siinta sharaxaad (sawir iyo magac)
Afka Snake - Fern
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daryeelka Beerta ee Beerka ah 2019